Cách trồng Cây thủy sinh để bàn và trong bể cá SIÊU dễ | Hatgiongtihon.net - trung tâm cung cấp hạt giống tí hơn
Cách trồng Cây thủy sinh để bàn và trong bể cá SIÊU dễ | Hatgiongtihon.net
Đang Đọc: Cách trồng Cây thủy sinh để bàn và trong bể cá SIÊU dễ | Hatgiongtihon.net in Hatgiongtihon.net
Ukuba ungumthandi wendalo kunye nezityalo kwaye ufuna ukuzisa indalo ekhayeni lakho, ke khulisa izityalo zasemanzini lukhetho olukhulu. Azizintle kuphela, kodwa zikwalula ukuzikhulisa kwaye uzikhathalele kwaye ungazikhulisa ngokwakho.
Izityalo zasemanzini onokuzisebenzisa ukuhlobisa i-aquarium okanye itafile zifanelekile kakhulu. Kwaye kweli nqaku, iFao iya kukukhokela indlela yokukhulisa izityalo ze-hydroponic kwireferensi yakho kwaye ukhule ezi zityalo ngokwakho!
1 Indlela yokukhulisa itafile yezityalo zasemanzini
1.1 1. Iimpawu zetafile yezityalo zasemanzini
1.2 2. Zikhula njani izityalo zasemanzini etafileni
2 Uzikhulisa njani izityalo zasemanzini kwi-aquarium
2.1 1. Yintoni yokulungiselela i-hydroponics?
2.2 2. Khetha izityalo zasemanzini
2.3 3. Faka i-aquarium
3 Ubuchule bokukhathalela izityalo zasemanzini
3.1 1. Ukuthena izityalo zasemanzini
3.2 2. Guqula amanzi kwizityalo zasemanzini
3.3 3. Yongeza isichumiso kwizityalo zasemanzini
3.4 4. Ukubonelela nge-CO2 kwizityalo zasemanzini
Indlela yokukhulisa itafile yezityalo zasemanzini
Ukutshintsha indawo yakho yokusebenza emnandi kakhulu khulisa izityalo zasemanzini iya kuba lukhetho olulungileyo kuba ayizisi kuphela ukutsha kodwa izisa intsingiselo ye-feng shui enhle kakhulu kumninikhaya.
1. Iimpawu zetafile yezityalo zasemanzini
Izityalo zaseDesktop zasemanzini zibhekwa ngabaninzi ukuba zibe zizityalo ze-feng shui ezizisa amandla amaninzi kunye nenhlanhla kumninikhaya.
Andazi ukuba yinyani na okanye akunjalo, kodwa eneneni, izityalo ezininzi zasemanzini zinamandla okucoca umoya kakuhle, ukugcina umoya wangaphakathi ucocekile, ukunceda abantu bazive bekhululekile. Ukususela ekubeni isebenza ngokufanelekileyo, ikwayinzuzo enkulu kwizityalo zasemanzini.
Ngenxa yokuba zizityalo zasemanzini, zineempawu zokuhlala emanzini, zikwazi ukuhluza kakuhle amanzi, zihlala ekukhanyeni okuphantsi, kulula ukukhula kwaye kulula ukuzinyamekela, ngoko zithandwa kakhulu. Kwaye nazi izityalo zasemanzini ezidumileyo:
Umthi we-fairy sisityalo esikhethekileyo sedesksi esikhethwe ngabasetyhini abaninzi ngenxa yombala oqaqambileyo kunye nokumila kweentyatyambo.
Ngalo mthi, unokuba ngabanini bawo nokuba uneliphi na ikamva, kuba lo mthi unemibala emininzi onokuthi ukhethe kuyo.
Ukuba ungumntu onomdla kwi-feng shui kwaye ufuna khulisa izityalo zasemanzini Ekhaya, umzekelo lukhetho olugqibeleleyo.
Ngenxa yokuba esi sityalo sinentsingiselo ye-feng shui, izisa amandla, umoya okhululekile, kunye nentuthuzelo kumninikhaya, kwaye kukho ezininzi iintlobo zemibala onokukhetha kuyo.
Umthi wemali sisityalo esikhule emhlabeni, kodwa siyakwazi ukuba sisityalo sasemanzini kwaye sikhethwa ngabantu abaninzi ngenxa yobuhle baso kunye nentsingiselo yeshishini elula ezisa ubutyebi kumniniyo.
Esi sisityalo esilungele kakhulu iiofisi ezincinci nezithandekayo kuba isityalo sesigcawu sinemilo ebhityileyo, umzimba onengca onobuhle obuphezulu.
Ukutyalwa kwezityalo zesigcawu kunamandla okuhluza umoya, ukuhluza ungcoliseko olulungileyo ukugcina isithuba esisingqongileyo sisoloko sisitsha kwaye siluncedo ebantwini.
Isityalo semali (gotu kola)
Ukuva nje igama kwanele ukubona intsingiselo ye-gerbera, efanelekileyo kakhulu kubantu abenza ishishini, ukongeza, inkangeleko yabo eluhlaza nayo inokusinceda siphumle kakuhle emva kweeyure zokusebenza.
Ukuba uyafuna khulisa izityalo zasemanzini ke i-lily sisityalo ongenakukwazi ukusihoya. Esi sityalo sinakho ukufunxa iigesi ezinetyhefu emoyeni kunye nemitha yemitha kwizixhobo zombane kakuhle kakhulu.
Ividiyo yezona zityalo zasemanzini ezisi-8 zilula ukukhula
2. Zikhula njani izityalo zasemanzini etafileni
Xa ukhetha khulisa izityalo zasemanzini Awuyi kuba nexhala kakhulu kuba izityalo zasemanzini kulula ukuzikhulisa nokuzinyamekela kwaye zinokukhuliswa ngabantu abaxakekileyo. Xa ukhathalela, jonga nje ukuba utshintshe amanzi ngamaxesha athile ngokwexesha okanye iimpawu zesityalo ngasinye.
Ngokomyinge, izityalo eziqhelekileyo zitshintsha amanzi kanye ngeveki, ebusika kunokuthatha ixesha elide kwaye ngamanye amaxesha zibonelela isityalo ngezondlo ezongezelelweyo ngokuchumisa umthi unokukhula unempilo.
Isifundo sevidiyo malunga nokukhulisa izityalo zasemanzini etafileni
Uzikhulisa njani izityalo zasemanzini kwi-aquarium
1. Yintoni yokulungiselela i-hydroponics?
Izinto ezisisiseko ezifanelekileyo kwizityalo – udaka lwe-alluvial, isanti, udongwe
Iinkqubo zokuhluza amanzi
Izityalo zasemanzini ezicocekileyo
Umthombo wokukhanya ogcweleyo
Ityuwa ye-aquarium okanye ityuwa ye-kosher
Izixhobo zokukhuhla i-algae
2. Khetha izityalo zasemanzini
Nini khulisa izityalo zasemanzini Kwi-aquarium kufuneka ukhethe izityalo ezithandwayo, ekulula ukuzikhulisa, ezintle zasemanzini ezilungele indawo ye-aquarium enje nge-Echinoderms, Lilaeopsis, Anarchies, Anubis okanye izityalo ezinde ezifana neAmazon Sword kunye neJava Fern (Java Fern),…
Ukwenza itanki yakho igqibelele kwaye iphile ngezityalo ezinobungakanani obahlukeneyo, ungasebenzisa i-moss ukuhombisa ezantsi kunye naphambi kwetanki. Kwaye kulula ukukhula mosses zamanzi acocekileyo ziquka iJava Moss, iWillow Moss, kunye neWisteria yamanzi.
Eyona nto ilula, kufuneka uthenge izityalo zasemanzini ezikhulileyo okanye tinamba yezityalo zasemanzini ukusuka kumasebe ukuba ufuna ukubiza kancinci.
Ezona zityalo zi-5 zintle kwaye kulula ukuzifumana zasemanzini kwii-aquariums
3. Faka i-aquarium
Ukukhanya yimeko efunekayo kwi-photosynthesis ukudala amandla kunye nezondlo kwizityalo, ngoko nini khulisa izityalo zasemanzini emva koko ufuna i-cap ye-full-spectrum fluorescent kunye nezibane zetanki ze-LED. Okanye ubeka itanki yeentlanzi kwindawo enokufumana ukukhanya kwendalo.
Ngokutsho kwamava avela khulisa izityalo zasemanzini Kwi-aquarium kufuneka uqale ngesibane samanzi se-2.5 W/4 L sefluorescent, ngaphandle kokuba unenkqubo ye-carbon dioxide efakwe endaweni yayo.
b. Zibeke zodwa izityalo zasemanzini
Phambi kokuba wongeze izityalo zasemanzini kwi-aquarium yakho, kufuneka uzibeke wedwa kwaye uziphathe izityalo njengoko izityalo ezitsha zinokuthwala izitshabalalisi ezifana neenkumba okanye i-shrimp ezinokubeka emngciphekweni ukhuseleko lwe-aquarium ngaphandle kokuba uzigcinile iintlanzi ezitya ezi zidalwa.
Ukongeza, inkqubo yokwahlula iya kukunceda ubone izinambuzane ngaphambi kokuba zibe nethuba lokungena kwitanki. Unokunyanga izityalo kunye nezisombululo zeblitshi ukuqinisekisa ukhuseleko lwetanki yakho.
Ukunyanga izityalo nge-bleach, kufuneka udibanise i-bleach ngamanzi kumlinganiselo we-1/19. Ngokuxhomekeke kubuzaza besityalo, unokucwilisa isityalo kwisisombululo malunga nemizuzu engama-2-3. Emva koko hlambulula isityalo ngokucokisekileyo emanzini ngaphambi kokusibeka emanzini ane-dechlorinated.
Kufuneka uthi nkxu isityalo emanzini anetyuwa emva kokuthenga ukukhusela iinkumba ekudumbeni. Xuba i-240 ml yetyuwa kwi-aquariums okanye ityuwa ye-kosher kwiilitha ezi-4 zamanzi. Emva koko ucwilise isityalo kwisisombululo se-15-20 imizuzwana, gcina iingcambu phezu kwamanzi kwaye uhlambe ngaphambi kokubeka kwi-aquarium.
Emva kweveki yodwa, unokubeka isityalo kwitanki.
c. Imathiriyeli yangasemva
Ilinen ene-substrate ehambelana nesityalo ukuvala umzantsi wetanki. Nini tyala umthi emanzini Uya kufuna isiseko esityebileyo. Isiseko esilungileyo sezixhobo zezityalo sithande ukufunxa amanzi xa eshukunyiswa, kwaye kuya kufuneka ubeke umaleko omncinci wegrabile ukukhusela oko.
I-Seachem Fluorite sisixhobo esisisiseko esiqulethe zonke izondlo eziyimfuneko kwaye inemibala emininzi kodwa ibiza kakhulu. Ungasebenzisa udongwe kunye ne-lateralite kwisondlo esithe xaxa kunye nexabiso eliphantsi. Nangona kunjalo, banengxaki yokuthatha ixesha elide ukuhlala etankini.
I-Aqua Soil yindawo esetyenziswa ngokuqhelekileyo equlethe izondlo ezininzi zezityalo, kodwa ibangela ukuba izinga le-pH emanzini lehle liye ku-7 kwaye linokuba yingozi kwiintlanzi ngoko ke kufuneka uhlolisise i-pH yentlanzi yakho kuqala xa ukhetha olu hlobo lwemvelaphi .
d. Ukutyala izityalo zasemanzini
Nini khulisa izityalo zasemanzini Kwi-aquarium kufuneka ubeke iingcambu ngaphantsi komphezulu we-substrate, kodwa zingabinzulu kakhulu, njengoko oku kuya kugubungela i-rhizome yesityalo kwaye isityalo sinokufa ukuba i-rhizome ingcwatywa. Qaphela: Qinisekisa ukuba imithi xa iplagiwe ayityalwanga phezu komnye.
Kwezinye iifern ezikhula ematyeni okanye emaplangeni afana nezinto ezifana nobulembu, iJava fern okanye iNana ukhula, songela intambo yakho yokuloba kancinci emthini, emva koko ujike umgca phezu kwelitye okanye iqhekeza lomthi kwaye uyekele ilitye kunye nomthi. emva koko isityalo siya kuhluma iingcambu etyeni okanye emthini.
I-Driftwood kunye ne-lava rock ziinketho ezilungileyo zokumisa umthi.
e. Khulula iintlanzi
Musa ukukhulula iintlanzi ngokukhawuleza, kodwa vumela itanki izinze malunga neveki ukususela kumhla wokukhululwa khulisa izityalo zasemanzini etankini kuba i-aquarium kufuneka ihambe kwinkqubo ebizwa ngokuba yi-microbiology ukwenza ummandla wamanzi uzinze kwaye ukhuseleke kwiintlanzi. Zimbalwa kakhulu iintlanzi ezinokuphila phambi kokuba amanzi azinziswe ngoko kufuneka unikele ingqalelo koku.
Isikhokelo esipheleleyo sendlela yokwenza i-aquarium elula kwaye entle ukusuka ku-A ukuya ku-Z
Ubuchule bokukhathalela izityalo zasemanzini
1. Ukuthena izityalo zasemanzini
Nini khulisa izityalo zasemanzini Kwi-aquarium, ukuba izityalo zikhula ngaphandle kwetanki, izityalo zangaphandle ziya kufa, ngoko kufuneka unqumle ngokucokisekileyo izityalo ezigqithisiweyo ngesikere esibukhali ukuphepha ukuba izityalo zingaboli, ezibangela ukuba zingabonakali.
2. Guqula amanzi kwizityalo zasemanzini
Ukutyala izityalo zasemanzini Ukutshintsha kwamanzi ngamaxesha athile kubaluleke kakhulu ukugcina izityalo zisempilweni, ngakumbi xa zikhula kwi-aquarium.
Ukutshintsha amanzi, uqala ukukrazula i-algae eludongeni lwetanki, emva koko usebenzise i-siphon ukufunxa i-10-15% yamanzi.
Xa usenjenjalo, nikela ingqalelo ekhethekileyo kuluhlu lwegrabile kunye nommandla ojikeleze izixhobo ezifakwe kwi-aquarium kwaye ungayibeki kwindawo yokutyala ukuze ugweme ukubulala izityalo ngengozi. Kufuneka ubeke ityhubhu ngaphezu kwe-substrate. Gcwalisa amanzi aphelileyo ngamanzi acocekileyo kunye ne-dechlorinated.
Ungawatshintsha ngokupheleleyo amanzi kodwa oku kunokuphazamisa inkqubo yendalo ekwitanki. Kungcono ukusebenzisa isihluzo samanzi kwaye ugcine i-aquarium ecocekileyo.
3. Yongeza isichumiso kwizityalo zasemanzini
Ukutyalahey emanzini Isichumisi ngokuqhelekileyo asifunwa, ngakumbi xa kukho iintlanzi kwitanki. Nangona kunjalo, ukukhula okungcono kwezityalo, ungasebenzisa isichumisi esingaphezulu. Zininzi iindlela zokuchumisa izityalo zasemanzini:
Yongeza i-fluorite ngokuthe ngqo kwi-substrate ukubonelela ngezondlo zezityalo.
Sebenzisa ama-substrates abekwe kufuphi neengcambu kwaye afakwe phantsi kwe-substrate ukubonelela ngezondlo kwisityalo.
Izichumisi zamanzi zifanelekile kwizityalo ezingathathi ingcambu kwi-substrate. Ungasebenzisa isichumisi samanzi 1-2 amaxesha ngeveki.
4. Ukubonelela nge-CO2 kwizityalo zasemanzini
Ukubonelela nge-CO2 eyongezelelekileyo ukuze izityalo zifunxe kwaye ziguqulelwe kwi-O2 ngempompo ye-CO2 ye-aquarium. Ukwenziwa kwe-CO2 eninzi idibanisa nokukhanya ukukhawulezisa i-photosynthesis, oku kuthetha ukuba izityalo ziya kuguqula i-CO2 ibe yi-oxygen ngokukhawuleza.
Nantsi indlela yokukhokela khulisa izityalo zasemanzini Ndicela ugqibe. Ndiyathemba ukuba umxholo wenqaku unokukunceda. Sala kakuhle!
Kỹ thuật trồng cây trầu bà tại nhà | Hatgiongtihon.net
Cách Trồng Và Chăm Sóc Cây Thông | Hatgiongtihon.net